Shirka Qaran ee Horumarinta Istiraatiijiyadda Warbaahinta Soomaaliya ayaa maanta si rasim ah uga furmay muqdisho – STAR FM SOMALIA
Furitaankii shirkan ayaa waxaa ka qeybgalay R/wasaare ku xigeenka Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carte,wasiirka Warfaafinta Dowlada Federalka Maxamed \_Cabdi Maareeye,Wasiirada Warfaafinta maamulada Puntland,Galmudug,wakiilo ka socday maamulada Jubbaland,Sh/dhexe iyo Hiiraan.
Shirkan ayaa waxaa mas’uuliyiintii ka hadashay ka mid ahaa Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye isagoo ka warbixiyay ujeedada shirka oo ah qorshaha shanta sano ee soo socota ee warbaahinta dalka ku howlgali lahayd. Sidoo kale wasiirka ayaa xusay muhiimada uu leeyahay xeerka saxaafada oo dhaqangalay kadib markii uu saxiixay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu dabajoogaa shir dhamaadkii bishii November ee 2015 lagu qabtay magaalada Muqdisho.Shirka Qaran ee Horumarinta Istiraatiijiyadda Warbaahinta Soomaaliya ayaa maanta si rasim ah uga furmay Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho.
Dib u dhac ku yimid Shirka madasha Wadatashiga Qaran oo maanta la filayay in uu ka furmo Magaalada Kismaayo